QISO XANUUN badan oo Daaha laga rogay…..(Maxaad kala socotaa sidii uu Garoonka ugu dhex Geeriyooday Laacibkii Manchester City iyo xulka Cameroon!!??) – Gool FM
QISO XANUUN badan oo Daaha laga rogay…..(Maxaad kala socotaa sidii uu Garoonka ugu dhex Geeriyooday Laacibkii Manchester City iyo xulka Cameroon!!??)
Byare November 7, 2018
(Europe) 07 Nof 2018. Laacibkii hore ee qadka dhexe Manchester United Eric Djemba Djemba ayaa daaha ka rogay Qiso xanuun badan oo ku aadan geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Marc-Vivien Foe mar uu u ciyaarayay xulkiisa Cameron afar dhammaadka Koobka Confederations Cup 2003-dii.
Djemba Djemba oo markaa qeyb ka ahaa xulka reer Afrika oo wajhayay Colombia ayaa la sheegay inuu ahaa shaqsigii ugu dambeeyay uu la hadlo Foe markii uu garoonka ku naf baxay.
Laacibkii hore ee West Ham iyo Man City Foe ayaa sii saadaaliyay geeridiisa ka hor inta uusanba kulanku bilaaban.
“Marna ma ilaawi doono wixii uu nagu yiri markii aan Baska kooxda saarneyn ka hor kulanka,” Djemba Djemba ayaa sidaa u sheegay SunSport.
“Wuxuu yiri, ‘Haddii uu qof doonayo inuu Maanta geeriyoodo, waan dhiman doonnaa. Uma baahnin inaan kulanka guul darreysano maxaa yeelay waxaan balan ka qaaday Xaaskeyga iyo Caruurteyda, waxaan u baahanahay inaan gaarno Final ka. Waxaan u baahanahay inaan ku guuleysano Confederations Cup.’.
Djemba Djemba wuxuu kulankaa qadka dhexe kala ciyaarayay Foe ciyaar ka dhacday Stade de Gerland ee magaalada Lyon.
Wuxuuna yiri isagoo hadalkiisa sii wata:
“Waxaan ahaa shaqsigii ugu dambeeyay ee isaga la hadla. Wuxuu igu yiri wax yar ka hor dhimashadiisa, ‘Eric, waan daalanahay.’
“Sidaa darteed waxaan ku iri, marka ay kubbadu baxdo waxaan u sheegi doonaa Tababaraha wuuna ku badeli doonaa.
“Laakiin daqiiqad xitaa ma uusan helin. Kubbada kor ayay ku maqneyd wuxuuna la booday Mario Yepes, kaa oo aan kala tirsanaa naadiga Nantes.
“Waxaan arkay Foe oo dhulka ku soo dhacaya intaa kaddibna waxaan arkay Mario oo qeylinaya , ‘Hey, hey, hey’.
“Dhankiisa ayaan u soo soconay waana ogeyn inuu isla markiiba naf-baxay.”.
Cameroon ayaa kulanka guuleysatay una soo baxday Final-ka si ay ula ciyaarto France, Djemba Djemba ayaana qiray in isaga iyo ciyaartoyda kale ee xulka ay aad uga cabsanayeen ina markale ciyaaraan kubbada.
“Ma dooneyn inaan markale ciyaaro,”.
“Qofkasta wuu ka cabsanayay inuu ciyaaro, 1-0 ayaan ku soo adkaanay waxaana u baahanay inaan ciyaarno Final ka.
“Laakiin waxaan dhahnay ma dooneyno inaan ciyaarno, ma aynaan jiifan karin habeenkaa, qofkasta wuu ooynayay. Sidee u dhiman kartaa adigoo u soo baxay inaad ciyaarto kubbada cagta?.
Djemba Djemba ayaana ugu dambeyn sheegay in Madaxwaynihii FIFA ee Sepp Blatter uu ku soo booqday Hotelkii ay ka deganaayeen Magaalada Saint-Etienne isla markaana uu Cadaadis ku saaray inay ciyaaraan Final ka.
“Wuu nala hadlay wuxuuna yiri inuu fahmayo inay adag tahay, balse wuxuu intaa ku daray in FIFA aysan garaneyn wax la sameeyo maxaa yeelay waa inaan aadno Final ka.
“Intaa kaddib xaaska Marc-Vivien Foe ayaa timid Hoteelka, waxayna nagu tiri inaan dooneyno inaan u ciyaarno isaga, iyada iyo caruurteeda.
“Sidaa darteed waxaan u baxnay inaan ciyaarno waxaana Final ka nalooga adkaaday 1-0. Thierry Henry ayaa dhaliyay goolka. Laakiin xaaladeena Maskaxeed ma fiicneyn.”.
"Juventus waxay heystaan Laacib Goolasha u dhaliya sida BIYO la Cabayo oo kale.".
SAWIRRO: Chelsea oo u safartay Belarus